Izinhlaka zesikhumba: ziyini, zenzelwe ini nokuthi uzinakekela kanjani | Amadoda aSitayela
Izendlalelo zesikhumba (i-epidermis, i-dermis, ne-hypodermis) zakha isitho esikhulu kunazo zonke emzimbeni. Ukubazi nokufunda ukuthi ungabanakekela kanjani kunemivuzo yobuhle nempilo.
Okulandelayo, sichaza ungqimba ngalunye nokuthi ungenzani ukuze uzigcine ziphilile futhi ziguga ukuguga:
1 Ziyini izingqimba zesikhumba?
2 Ungasinakekela kanjani isikhumba
2.1 Zivikele emisebeni ye-UV
2.2 Yamukela imikhuba enempilo
2.3 Dala isimiso esiqinile senhlanzeko
Ziyini izingqimba zesikhumba?
I-epidermis ingeyokuqala yezingqimba zesikhumba, kanye ne-thinnest. Ngaphezu kokunikeza isithiyo esivikelayo, kuhlala ama-melanocyte, amaseli akhethekile akhiqiza i-pigment melanin. Ngakho-ke Kuyingxenye lapho umthwalo wokukhiqiza ithoni yesikhumba ulele khona.
Ihlukaniswe ngama-sublayers amahlanu. Isendlalelo sayo sangaphandle yi-stratum corneum (stratum corneum), okuyi iqukethe amangqamuzana afile. Ezinye zisuswa ngokwemvelo, kanti ezinye zidinga ukusetshenziswa kwemikhiqizo ekhipha amafutha. Amanye ama-sublayers yi-stratum lucid (stratum lucidum), stratum granulosa (stratum granulosum), stratum spinosum (stratum spinosum) ne stratum basalis (stratum basale).
Isendlalelo sesibili sesikhumba sibizwa ngokuthi i-dermis. Njengoba ihlala i-collagen, i-elastin ne-hyaluronic acid, ibamba iqhaza elibalulekile ekugcineni isikhumba sinwebe futhi sibushelelezi. Kumele kuqashelwe ukuthi i-dermis iqukethe nezinhlayiya zezinwele, imithambo yegazi, izindlala ezi-sebaceous, nezinzwa ezenza kube lula ukuthinta nokubona kushisa nokubanda.
Kungokwesithathu nokugcina kwezingqimba zesikhumba. Ukuncishiswa kwalesi sicubu se-adipose kubangela ukuxega nemibimbi. Iphinde ibe nezindlala zomjuluko futhi inomsebenzi wokonga ukushisa nokuvikela izitho ezibalulekile.
Ungasinakekela kanjani isikhumba
Njengoba iminyaka ihamba, ukuhlanganiswa kwe-collagen, i-elastin ne-hyaluronic acid kuyehla. Ngokufanayo, kuncishiswa amafutha ebusweni. Zonke lezi zinqubo ezingagwemeki ezingxenyeni ezahlukahlukene zesikhumba zidala ukuvela kwemibimbi nokuwohloka. Noma kunjalo, kunezinto eziningi ongazenza ukwenza imibimbi ibe nzima:
Zivikele emisebeni ye-UV
Ukugcina isikhumba siphilile ngaphakathi nangaphandle kubaluleke kakhulu ukungazivezi ngokweqile emisebeni ye-UV, njengoba zingadala amabala nemibimbi, umdlavuza wesikhumba ube nomphumela wawo omubi kakhulu. Ngaphezu kokusebenzisa ama-sunscreen nge-SPF 30 noma ngaphezulu (ngenhlanhla, amafutha amaningi emini asevele enawo kumafomula awo), kunezinye izincomo okufanele uzicabangele. Futhi hhayi kuphela ehlobo, kodwa unyaka wonke:
Ukumboza isikhumba sakho ngezingubo lapho ungaphandle
Gqoka izigqoko nezibuko zelanga
Gwema imibhede yokushuka
Ngakolunye uhlangothi, isikhumba sikhiqiza uvithamini D ngokwemvelo uma sihlangana ngqo nemisebe yelanga. Vitamin D ubamba iqhaza ukumuncwa calcium emzimbeni. Kukholakala nokuthi idlala indima enkulu ekuvikeleni izifo ezifana nokuwohloka komqondo nezinye izinhlobo zomdlavuza.
Nokho, odokotela besikhumba bancoma ukuthola uvithamini D ngokudla kunokuvezwa yilanga. I-salmon, i-tuna, i-yolk yeqanda, namakhowe kungeminye yemithombo yemvelo engcono kakhulu yalesi sakhi. Ungathola futhi umthamo wakho wansuku zonke kavithamini D ngokusebenzisa ubisi oluqinile kanye nokusanhlamvu, kanye nangosizo lwezithako zokudla okunempilo.
Yamukela imikhuba enempilo
Umphumela weminye imikhuba ubaluleke kakhulu kuneminye, kodwa cishe konke okwenzayo usuku lonke kuthinta isimo sesikhumba sakho. Ukuziqeqesha okungenani kathathu ngesonto, ukulala amahora angu-7-8 ngosuku, nokudla ukudla okunomsoco kuphakathi kwemikhuba ezuzisayo. Okuyingozi ugwayi, ukusetshenziswa kabi kotshwala, impilo yokuhlala kanye nengcindezi.
Uma uphila impilo enempilo futhi ufuna ukuthi isikhumba sakho sithambe kakhudlwana futhi sibe namanzi amaningi, cabanga ukukhulisa ukutholakala kwama-omega fatty acids nama-antioxidants ekudleni kwakho. Ungakuthola ngokudla okulandelayo:
Inhlanzi eluhlaza okwesibhakabhaka
Dala isimiso esiqinile senhlanzeko
Ukuhlanza nokuhambisa isikhumba nsuku zonke kubalulekile. Kufaka phakathi abahlanzayo, izikhuhla, okhilimu bamehlo, umswakama, ama-serum nezithambisa umzimba ku-arsenal yakho yokunakekela.
Abahlanzi basusa ukungcola nokwakhiwa kwe-sebum. Bashiya isikhumba silungele ukuncela yonke eminye imikhiqizo yenqubo yakho yenhlanzeko. Sebenzisa amanzi asivivi bese ushintsha isihlanzeli sakho se-exfoliator (kungaba ngokomzimba noma ngamakhemikhali) ama-1-2 ngesonto ukususa amaseli afile ukuhlanzwa okuphelele.
Ukhilimu wamehlo uvimbela imibuthano emnyama nezinyawo zegwababa, ezingezinye zezimpawu zokuqala zokuguga ebusweni. Yize amadoda amaningi eqa lesi sinyathelo, iqiniso ukuthi lingenza umehluko omkhulu uma kukhulunywa ngesikhumba sobuso nesithombe jikelele.
Amafutha asiza ukugcina isikhumba sithambile futhi sikhanya. Kangangokunokwenzeka, futhi kubambezela ukubonakala kwezimpawu zokuguga. Imini, ubusuku nomzimba yizinhlobo ezintathu zikakhilimu ezidingekayo. Ungangeza futhi eyodwa eyenzelwe izinyawo uma ubona kunesidingo.
Ukuthola i-hydration ephelele ebusweni, cabanga ukuhlanganisa i-moisturizer yakho ne-serum. Ngenkathi eyokuqala ihlala izingqimba zesikhumba sangaphandle, iqinisa umgoqo wayo ongangeni manzi, ama-serum angangena ngokujulile ngenxa yesakhiwo sawo esincane samangqamuzana.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izinhla zesikhumba
U-Esperanza Sevillano kusho
Ulwazi oluhle esikhumbeni nokugcina engqondweni. Kubalulekile ukwazi ukuthi isikhumba "sakhiwa" kanjani ukuze sisinakekele futhi sisivikele. Ngiyaqhubeka ngikufunda. Ngikufisela okuhle.
Phendula u-Esperanza Sevillano